Kala Vernac Archives ⋆ Magamba Network
Cyber September 19, 2017 Culture, Imported, Kala Vernac0 comments
By Jeda Tichapakura Papfura mavhiki mashoma kubva zvaka uya mufindisi TD Jakes, asi sekutaurwa kwazvo, vanonzi vakaparidzira maChair. Chingava chikonzero ndechekuti kwakanga kune nyaya diki inenge hambe yainetsa. Ndoziva kuti hangu yakubhohwa kunzwa nezvayo but yaiva nyaya iya yaZodwa. Zvisinei hazvo, ndakadzidza zvinhu zvandanga ndisina kumbofunga muhupenyu hwangu pamusoro pezvinhu zvidiki zvakaita senduwe. You see, […]
The post Zvinhu zvidiki zvinogona kudengendetsa nyika nhai? appeared first on Kalabash Media.